SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kirundi Korean Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese (Brazil) Romanian Russian Samoan Sepedi Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese
Kirasi Yechi130 Inopedza Kudzidza kuGiriyedhi
ZVIRI pachena kuti kirasi yechi130 yeChikoro cheBhaibheri cheWatchtower cheGiriyedhi payakapedza kudzidza, yaifara uye yakanga yangomirira kuudzwa nyika dzayaizonoshandira. Musi weMugovera March 12 2011, vanhu vanopfuura 8 500 vaisanganisira vadzidzi pamwe chete nehama neshamwari dzavo, vakaungana kuti vapupurire chiitiko ichi. Vanhu ava vaifarira chiitiko ichi uyewo vakanga vangomirira kunzwa kuti mamishinari aya akanga anyatsodzidziswa aizenge achitumirwa kunyika dzipi kuti anodzidzisa vanhu chokwadi cheBhaibheri.
‘Vanofara Vose Vaya Vari Kuramba Vachimirira’ Jehovha
Pfungwa iyoyo inonyaradza, iri pana Isaya 30:18, ndiyo yaiva musoro wehurukuro yakapiwa naHama Geoffrey Jackson, vanova nhengo yeDare Rinodzora reZvapupu zvaJehovha uye vaiva sachigaro wepurogiramu yacho. Vakakorokotedza vadzidzi noushamwari uye nomufaro, vakati zvavakanga vashingirira kupedza kosi yeGiriyedhi kunyange hazvo yaisava nyore, vaiva nechokwadi chokuti chiitiko chomusi uyu chaizoperawo zvakanaka. Zvii zvaigona kutarisirwa nevadzidzi ava kwavaizoenda? Vakakurukura pfungwa nhatu dzinobatsira dziri pana Isaya 30:18-21.
Chokutanga, Hama Jackson vakati, “Munogona kutarisira kuti Jehovha achanzwa minyengetero yenyu.” Vakataura nezvevimbiso iri mundima 19, yokuti: “[Mwari] achakunzwira nyasha paanonzwa kuchema kwako.” Hama Jackson vakati Jehovha anopindura munyengetero womumwe nomumwe wedu, vachiti chiHebheru chepakutanga chinoratidza kuti mundima iyi Mwari aitaura nezvokuteerera munhu mumwe chete, kwete vakawanda. “Zvaari Baba vedu, Jehovha haatibvunzi kuti, ‘Sei usingaiti sanhingi uya akasimba?’ Pane kudaro, anonyatsoteerera mumwe nomumwe wedu. Uye anopindura.”
Chechipiri, mukurukuri uyu akabvuma kuti tinogona kutarisira kuti tichawana matambudziko. “Jehovha haativimbisi kuti upenyu hwedu huchaita muchechetere mvura yeguvi, chaanotivimbisa ndechokuti achatibatsira.” Ndima 20 inoratidza kuti Mwari akagara ataura kuti vaIsraeri pavaizokombwa, matambudziko nokudzvinyirirwa zvaizovapo sokungowanika kwaiita chingwa nemvura. Asi Jehovha aizongogara akagadzirira kununura vanhu vake. Vadzidzi veGiriyedhi vachatarisanawo nenhamo nematambudziko, zvimwe zvacho zvavaisatombofungira! Hama Jackson vakawedzera kuti, “Asi munogona kutarisira kuti Jehovha achakubatsirai kuti mukunde dambudziko rimwe nerimwe.”
Chechitatu, Hama Jackson vakayeuchidza vadzidzi kuti vatarisire kuudzwa zvokuita, uye kuti vatokumbira kuudzwa, nokuti ndiyo pfungwa iri mundima 20 ne21. Vakati, nhasi muKristu mumwe nomumwe anofanira kunyatsoteerera Jehovha paanenge achitaura achishandisa Bhaibheri nemabhuku anotsanangura Bhaibheri. Mukurukuri wacho akakurudzira vadzidzi noushamwari kuti varambe vachiverenga Bhaibheri zuva nezuva, nokuti vakadaro vachawana upenyu.
Hama Anthony Morris veDare Rinodzora vakatsanangura zvinorehwa nemashoko anowanikwa muMagwaro okuti ‘kutya Jehovha.’ (2 Makoronike 19:7) Mashoko iwayo haarevi kutya zvingazoitika, asi anoreva chido chakasimba chokuita zvakarurama uye kuremekedza kwomwoyo wose uye kwechokwadi kungatoita kuti munhu adedere. Hama Morris vakarayira vadzidzi kuti, “Kutya ikoko ndiko kwamunofanira kunoita kwamuchaenda.” Vadzidzi vangaratidza sei kuti vanotya Jehovha saizvozvo? Hama iyi yakataura nzira mbiri dzinobatsira.
Vakatanga nokukurudzira vadzidzi vacho kuti vashandise zano riri pana Jakobho 1:19 rinoti: “Munhu wose anofanira kukurumidza kunzwa, anonoke kutaura.” Vakati vadzidzi vakanga vadzidza zvakawanda pavaiita kosi yavo yemwedzi mishanu, asi vaifanira kungwarira kuti pavanoenda kwavachanoshandira vasazoshamisira nezvose zvavakadzidza. Vakati: “Munofanira kutanga mateerera. Teererai ungano yamuchanopinda nayo nevaya vanenge vachitungamirira munyika yamuchanoshandira; teererai zvavanotaura nezvenyika yavo netsika dzavo. Musanyara kuti, ‘Handizivi.’ Kuratidza kuti zvamakadzidza zvakakubatsirai, rambai muchidzidza. Mukadaro muchaona kuti hamuna zvakawanda zvamunoziva.”
Chechipiri, Hama Morris vakaverenga Zvirevo 27:21 inoti: “Hari yokunatsira ndeyesirivha, uye vira nderendarama; asi munhu anoedzwa maererano nokurumbidzwa kwake.” Vakatsanangura kuti kurumbidzwa kunogona kutinatsa, sokunatswa kunoitwa ndarama nesirivha. Sei? Patinorumbidzwa, zvinogona kubudisa humwe unhu hwedu. Zvingaita kuti tidade torasikirwa noukama hwedu naJehovha, kana kuti zvingatiyeuchidza kuti Jehovha ndiye ari kutibatsira tobva tatsunga kusambomutadzira. Saka Hama Morris vakakurudzira vadzidzi kuti pose pavanorumbidzwa, vazvitore zvakanaka, somukana wokuratidza kuti ‘vanotya kugumbura Jehovha.’
“Koshesai Basa Renyu”
Hama Guy Pierce veDare Rinodzora vakapa hurukuro inokosha yepurogiramu yacho. Vakakurukura musoro uri pamusoro apa, vachitsanangura kuti shoko rokuti “mumishinari” rinoreva “munhu anotumwa kunoita basa.” Vakati ndokusaka mamishinari akasiyana-siyana achiita mabasa akasiyana-siyana. Vakawanda vanoita zvokuporesa uye zvematongerwo enyika vachiti ndizvo zvichagadzirisa matambudziko ari munyika. Vakavaudza kuti: “Imi makasiyana navo.” Pakudini?
Vadzidzi pavaiita kosi yavo yeBhaibheri, vakadzidza zvakawanda nezvokuporesa. Jesu paakamutsa kasikana kaduku, vabereki vako “vakanga vasingachabatiki nomufaro mukuru kwazvo.” (Mako 5:42) Saizvozvowo, mapofu paakasvinudzwa, akafara zvokubata denga. Chimwe chaiitirwa zvishamiso izvozvo ndechokutiratidza zvichaitwa naKristu munyika itsva iri kuuya. Panguva iyoyo, “boka guru” revanhu vakarurama vachapona pachaparadzwa nyika ino richabvisirwa zvirwere zvose. (Zvakazarurwa 7:9, 14) Vadiwa vavo vanenge vamutswa vavachatambira kubva mumakuva, vachangewo vaine utano hwakakwana. Fungidzira kufara kwavachaita!
Zvisinei, Hama Pierce vakatsanangura kuti kurapwa kwezvirwere hakusiri iko kunozombonzi ndiko kunonyanya kukosha. Vanhu vakarapwa naJesu vakazorwarazve. Vanhu vaakamutsa vakazofa zvakare. Kunyange maziso evanhu vaakasvinudza akazongovharazve noupofu kana kuti norufu. Asi kubatsira vanhu pakunamata kwakaitwa naJesu ndiko kwainyanya kukosha. Mamishinari epaGiriyedhi ane basa rokurapawo vanhu pakunamata. Anobatsira vanhu kuti vayananiswe naBaba vedu vokudenga kuti vave vapenyu mumaonero aMwari. Vaya chete vanenge varapwa pakunamata ndivo vanozowana upenyu husingaperi. Hama Pierce vakati: “Kurapwa ikoko ndiko kunoita kuti Mwari arumbidzwe. Munozonzi mabudirira mubasa renyu kana marapa vanhu saizvozvo.”
Zvimwe Zvinhu Zvitatu Zvaikosha Zvakaitika Pazuva Racho
“Nhasi Richava Zuva Rakanaka Here?” Mubvunzo uyu wakakurukurwa naHama Robert Rains vemuDare reBazi rokuUnited States. Vakakurudzira vadzidzi kuti zuva roga roga vashandise nguva yavo nokuchenjera, vatungamirirwe neShoko raMwari pavanosangana nematambudziko uye vanyengetere kuna Jehovha kuratidza kuti vanovimba naye. Zvose izvi zvichaita kuti zuva ravo rimwe nerimwe ringe rakanaka.
“Muchaita Kuti Zvekare Zvive Zvitsva Here?” Hama Mark Noumair, mumwe murayiridzi weGiriyedhi, vakabvunza mubvunzo uyu muhurukuro yavo. Vakakurukura 1 Johani 2:7, 8, apo muapostora Johani akataura nezve“murayiro wekare” waivawo “murayiro mutsva.” Zvose zvaingoreva chinhu chimwe chete, kuti vateveri vaKristu vanodanana nomwoyo wose, zvokutofirana. (Johani 13:34, 35) Murayiro wacho waiva wekare pakuti pakanga pava nemakumi emakore Jesu pachake apa vateveri vake murayiro uyu. Asiwo waiva mutsva pakuti vaKristu vakanga vava kutarisana nematambudziko avakanga vasati vambotarisana nawo, saka vaifanira kuita zvinoratidza kuti vanodanana zvokutofirana. Mamishinari achatarisanawo nemamiriro ezvinhu avasati vajaira uye anofanira kuratidza kuti ane rudo munzira dzavanga vasati vamboita. Vangazviita sei?
“Usaitira vamwe zvausingadi,” vakadaro Hama Noumair. Vakanyevera kuti kana tikaona mumwe munhu achiita zvatisingafariri isu tomutevedzera, tinenge tangofanana naye, uye tinozvikanganisira ukama hwedu naMwari. Asiwo, patinoitirwa izvi tobva taratidza rudo, tinoita kuti “chiedza chechokwadi” chipenye tobvisa rima rokunamata.
“Takurai Mutoro Wacho.” Mumwe murayiridzi wokuGiriyedhi anonzi Michael Burnett ndiye akakurukura musoro uyu unobatsira chaizvo. Akataura nezvevanhu vokuno kuAfrica vanotakura zvinhu zvinorema nomusoro. Vanoshandisa hata, kachira kanomonwa koiswa pamusoro kanobatsira kuti munhu akwanise kutsiga zvinorema uye asarwadziwa, zvoita kuti akwanise kunyatsofamba akadengezera. Mamishinari eGiriyedhi achava nemabasa anorema okunoita kunyika dzavachanoshandira, asi vakapiwa chinhu chakafanana nehata, kureva kunyatsorovedzwa kwavaiitwa pachishandiswa Bhaibheri. Pavachashandisa zvavakadzidza, vachakwanisa kutakura mitoro yavo zvakanaka.
Zvakaitika Uye Kubvunzurudza
Vanhu pavanenge vari kuChikoro cheGiriyedhi vanomboendawo kunoita ushumiri neungano dzeZvapupu zvaJehovha dzavanenge vachipinda nadzo. Hama William Samuelson, mutariri weDhipatimendi Rezvikoro Zvokunamata, vakataura zvimwe zvakaitika kuvadzidzi, pavaikurukura musoro waiti, “Usarega Ruoko Rwako Ruchizorora.” (Muparidzi 11:6) Vadzidzi vakaratidza kushingaira kwavaiita muushumiri, vachidzokorora zvakaitika semaitikiro azvakaita, kuti vaiwana sei mikana yokuparidza mundege, mumaresitorendi, uye panodirwa peturu. Vakaparidza pasuo nesuo, kuparidza vasina kuita zvokuronga, uye kuita zvokunyora tsamba. Chokwadi havana kurega ruoko rwavo ruchizorora, uye pakava nezvakanaka zvakaitika.
Imwe hama inoshanda mudhipatimendi rinotarisira chikoro cheGiriyedhi inonzi Kenneth Stovall yakazobvunzurudza varume vatatu vagara nebasa roumishinari vanoti, Barry Hill aiva mumishinari kuEcuador neDominican Republic, Eddie Mobley aiva kuCôte d’Ivoire, uye Tab Honsberger kuSenegal, Benin, neHaiti. Vose vakakurukura zvakazonaka musoro waiti “Edzai Jehovha Mugowana Zvikomborero.” (Maraki 3:10) Somuenzaniso, Hama Hill vakarondedzera kuti ivo nomudzimai wavo vakakunda sei dambudziko remamiriro okunze okuEcuador. Dzimwe nguva kwaipisa kuchiita guruva, kwopisawo kuine madhaka. Vanoyeuka kuti kwemakore maviri nehafu, vaigezera mumabhaketi. Asi havana kumbofunga zvokusiya basa racho; vaiona basa ravo sechikomborero chinobva kuna Jehovha. Vakati, “Tainakidzwa nemararamiro ataiita.”
Pakapera purogiramu yacho, mumwe wevadzidzi vacho akaverenga tsamba yaibaya mwoyo yaibva kukirasi yakanga yapedza kudzidza ichionga nomwoyo wose kudzidza kwayakaita. Tsamba yacho yaiti: “Kutenda kwedu kwakwidziridzwa zvikuru, asi tinoziva kuti tichine zvakawanda zvatinofanira kudzidza.” Vadzidzi vose vakagamuchidzwa zvitupa zvavo, uye vakaudzwa nyika dzakasiyana-siyana dzavaizonoshandira. Hama Jackson vakazopedzisa purogiramu yacho nokuvimbisa vadzidzi kuti vaigona kutarisira kuti Jehovha avabatsire muupenyu hwavo, kunyanya pakuti vakurire matambudziko. Vose vaiva vakateerera vakabva vava netariro yokuti ramangwana raizova rakanaka uye richifadza. Hapana mubvunzo kuti Jehovha achashandisa mamishinari aya kuti aite zvakawanda zvakanaka.
[Chati/Mufananidzo uri papeji 31]
ZVAKAITA KIRASI YACHO
9 nhamba yenyika dzaimirirwa
34.0 avhareji yezera
18.6 avhareji yemakore kubvira pakubhabhatidzwa
13.1 avhareji yemakore omuushumiri hwenguva yakazara
(Kana uchida mashoko azere, ona bhuku racho)
Vaiva mukirasi yacho vakaendeswa kunyika dziri pasi apa
NYIKA DZAKATUMIRWA MAMISHINARI
[Mufananidzo uri papeji 31]
Kirasi Yechi130 Yechikoro cheBhaibheri cheWatchtower cheGiriyedhi Inopedza Kudzidza
Pane zvakarongwa pasi apa, mitsetse yakarongwa ichibva mberi ichidzoka shure, uye mazita akarongwa kubva kuruboshwe zvichienda kurudyi mumutsetse woga woga.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zuva Raitarisira Mamishinari Kuudzwa Nyika Dzavaizonoshandira
w11 8/1 pp. 28-31